PressReader - Kwayedza: 2017-10-13 - Dzidzo inoda kuvandudzwa
Kwayedza - 2017-10-13 - Maonero Edu -
SHUNGU dzemubereki wose ndedzekuti mwana wake adzidze agozove neupenyu hwakanaka sezvo fundo iri nhaka yeupenyu.
Hazvifadzi kuona mubereki nemwana vachishingairira mufundo isingazopa pundutso mune remangwana.
Ichi ndicho chikonzero chikuru chakaita kuti Hurumende ione zvakakosha kuvandudza gwaro redzidzo yepuraimari nesekondari, ndokuunza New Curriculum kuitira kuti fundo yevana inge ichifambirana nenguva.
Zvakakoshawo kuti dzidzo yepamusoro inge ichivandudzwa kuitira kuti ifambirane nenguva.
Zvinorwadza kunzwa kuti kune mamwe madhigirii ari kuitwa nevadzidzi ayo anogona kusave nebasa panosvika gore ra2040 nekuda kwekuti anenge asisaenderane nezvinenge zvichidiwa panguva iyoyo.
Izvi zvinoreva kuti vadzidzi ava vanenge vasina chiyamuro mukusimudzira upfumi hwenyika.
Vamwe vavo vanenge vapedza makore matatu kana mana vachiita zvidzidzo izvi asi pakupedzisira zvozoonekwa kuti madhigirii acho haana maturo.
Asi Hurumende iri kutsoropodza mamwe emayunivhesiti aya ichiti ari kubura vadzidzi vasingakwanise kuzvishandira asi vane chinangwa chekutsvaga mabasa chete.
Ichi ndicho chimwe chikonzero chikuru zvakakosha kuti dzidzo yepamusoro inge ichivandudzwa.
Kuvandudzwa kwedzidzo yepamusoro kwakanakira pakuti zvinobva zvaita muchechetere semvura yeguvi nedzidzo yepuraimari nesekondari iyo yakatovandudzwa kare.
Dzidzo ine pundutso ndeiyo yekuti mudzidzi akwanise kuzvishandira kwete kuda kushandiswa chete.